Uchwepheshe We-Semalt Uveza 13 Izindlela Ezilula Zonke Amabhizinisi Aphumelelayo Ahlola Ngayo
Kwabanye abantu impumelelo ingase ibonakale iphakamisaisikhwama somhlabathi, kodwa kubambalwa, kungumkhuba nje. Kwenzeka kanjani?
Isigaba sokuqala ukubulala ukwesaba, okuvela emqondweni wokuhluleka, ngokubuzangokuqhubekayo nokuhlela kahle. Imenenja ehamba phambili yePhasimende yePhasimende i-Semalt ,U-Igor Gamanenko uthi iminyaka yokuhlangenwe nakho iyabaluleke kakhuluinikele ekufezeni imisebenzi eminingi. Nanka amathiphu ayishumi nantathu kulokhoukwenza ukuze uphumelele ebhizinisini, ukuthi uchwepheshe wabelana ngokudweba kulolu phikoyomsebenzi wokukhiqiza osebenzayo eSemalt.
Kufanele ube nesithombe esikhulu salokho ofuna ukukufeza kulo mqondoisigaba ekuqalisweni kokugcina nokuqapha - fake drivers license online free. Ngesikhathi esifanayo, itkubalulekile ukuqonda inani labantu ofuna ukuzibandakanya, iubuchwepheshe ohlela ukuyisebenzisa, imoto evumela ukuhambisa kokubiliabantu nobuchwepheshe. Chaza amakhasimende ahlosiwe, igunya lokulawulakanye nenani lokulinganisa lentengo elizoqinisekisa inzuzo noma okungenani igcineisinyathelo isikhathi esithile uze uphule ngisho nangaphezulu.
Ngemuva kokuthi uqedile ngemephu yokucabanga, ukuhlela okuningiliziwe kwakho konkeizici ezihlukile zomqondo wakho zenziwa. Kusukela ebaluleke kakhulukuya okungenani, zonke izinkomba ezibiza kufanele zilingane ngokufanayo.Okuyinhloko yale nqubo eqinile ukulinganisa kangcono ukuthi yiniisikhathi kuzokuthatha ukuze ufeze umgomo wakho okwakungadingekievezwe ngesikhathi sokucabanga.
Yebo, kufanele wazi kangcono uhlobo oluthile oluthileulwazi, kepha lokho akwanele ukuqinisekisa ukuphumelela kwakho.Ngakho-ke, isidingo sokucwaninga okujulile asinakugwenywa njengabanyeamaqiniso angeke avulekele kuwe kusukela ekuqaleni noma izintouhlukile, futhi udinga ukwazi..Futhi, kuye ngokuthiulwazi oludingayo, ukucela ulwazi kufanelekwenziwe ngendlela efanele. Ekugcineni, ulwazi olufanele luyiokubaluleke kakhulu ukuze, ungachithi izinsiza endleleni engalungile.
Yenza inhlolovo ngolwazi onalo, qinisekisaubuqiniso futhi uvumelanise nomgomo wokuqondisa njengobasishilo ngaphambili. Ngesikhathi sokuqinisekisa, ukuvumelana kuwukuthikubaluleke kakhulu ngokushesha nje lapho kubangelwa khonaukuthembeka kolwazi olugciniwe.
Thola ezinye izindlela
Uma usufike lonke ulwazi,kuzothatha isikhathi ukubuka nxazonke bese ubona ukuthikusekhona ezinye izindlela ezingcono kakhuluukufezekisa imiphumela efanayo noma engcono. Wenzaniucabangele? Ucabanga ngamakhasimende okubhekiswe nomaamakhasimende kuqala, hhayi izindleko, isikhathi noma izinsiza.Emva kokucacisa ukuthi yini ebaluleke kakhuluukuze ukwaneliseka kwamakhasimende, khona-ke kufanele ucabangeleisici sezindleko, isikhathi kanye nezinsiza kanyekhetha izinketho ezinhle kakhulu ezenzweni zakho.
Dweba i-Plan Yokugcina
Ngokuhlaziywa kwezindlela ezitholakalayo,manje ungaba nesibindi ngesiphi isinyatheloukuqasha, okuzobeka phambili labo ababandakanyekayo 'izithakazelo. Enye yazo zonke izindlela zakho kufanele umengokuphathelene nokwaneliseka kwamakhasimende nesikhathi. Musaukhohlwa ukuthi unenkululeko yokusebenzisa abaningiamasu ngezikhathi ezahlukene kuye ngokuthiizimo ezikhona. Okubaluleke kakhuluizinto okumele zizuzwe ziyimiphumela emihle.
Khetha Umthombo Wezikhwama
Icala lakho lebhizinisi liyinhloko kakhuluukuthola izimali ezidingekayo. Kuyindlela ecacile yokubaluleka kwalesi sinyathelo futhiisizathu sokuthola isu elithile ngokumelene nazo zonke izinkinga. Kufanele kube ngesikhathi esifanelefuthi eyinkimbinkimbi, elula futhi ecacile yokungabaza futhi, noma yiluphi uhlobo lokungaqondakali. Okubaluleke kakhulu,kufanele usebenzise imithombo engeke ithinte ibhizinisi lakho kabi, isibonelo,isamba senzalo ephakeme, izibopho zomthetho ezinde futhi eziyinkimbinkimbi, izimo eziqinileiziqinisekiso. Njalo ubhekene nezindleko ze-parametric zezimali ezizobe zilandele zonke izindlelaizingozi kanti namanje zingena emkhawulweni wokungenisa imali okulindelekile.
Buyekeza uhlelo lwakho
Akukaze kube isikhathi sakho esiningi nemithombo yakhoukunciphisa izenzakalo ezizoholela ekulahlekelweni. Ngakho, thatha isikhathi futhi ubukeze konke okwenzileizinsuku ezedlule, amasonto nezinyanga. Ungakuvumeli ukuba ungene eminyakeni kodwa uma wenza, yenzaQinisekisa ukuthi awulahli noma uzinikele ekuqedeni..Mhlawumbe, kungase kube khona amanye ama-dotting kanyeukuwela ukuze kwenziwe. Uma uthola, ungachithi isikhathi, yenza okudingayo futhi uhlangabezane nesinyathelo esilandelayo.
Phumelela uhlelo lwakho
Sekuyisikhathi sokuyifinyelela nokudlalakancane kancane ngoba awukwazi ukuthi yini elinde. Yize leli zwi elithi "ukuhlela kusindisa kabiliisikhathi esiningi ngesikhathi sokusebenzisa "kuyiqiniso, kodwa akuzange kugcizelele isidingo sokuthileka, ngakho-ke thatha kancanefuthi zizinzile. Lokhu kuzokwenza ukwazi ukulungisa kabusha ngokushesha uma kufanele kube nezimo ezingalindelekileokufakazela ukuthi ekugcineni, ukungafani phakathi kwesu elihleliwe kanye nesu eliqalisiweuzoba mncane kakhulu futhi alawulwe.
Hlola uhlelo lwakho
Ayikho ibhizinisi eliphumelelayo elingaphandleukuqapha nokulawula. Yilokho okuphawulekayo kokuqiniswa nokuqinisekiswa kwekhwalithi. Okuyinhlokoukuqapha kufanele kuthathe izinyathelo ezifanele ngokushesha ngangokunokwenzeka ngoba kude kuyatholakala kusukaplan, kube nzima kakhulu ukuphatha, futhi kubiza ibhizinisi. I-Backlogukuphathwa kuhilela izinga eliphakeme lokubeka phambili; umbuzo uwukuthi: obani abanomtshisekelo ozophiwakuqala kunomunye? Futhi into elandelayo efika engqondweni ingxabano.
Thatha izinyathelo zokulungisa
Isidingo sokuvikela isithombe nesithunziyebhizinisi kanye nezinye izinto ezifana nezindleko, ukwaneliseka, kanye nezinzuzo zokuxhaswa kweziboneleloizinyathelo ezidingekayo zokulungisa. Izimvume zokuvuselela kabusha, ukuphambuka nokulungiswa kwamaphutha kuyodingeka kubeokwenziwe ngaphakathi kwesikhathi esithile esingeke sithinte isikhathi sonke sebhizinisi.
Vumela Abantu Bazi Ibhizinisi Lakho
Sebenzisa ama-social media, izwi lomlomokanye nazo zonke ezinye izindlela zokukhangisa ukuthuthukisa ibhizinisi lakho. Lokhu kuzokwandisa ukuthengisa nokukhulisa imali ngenkathiizindleko zizowela kancane kancane futhi inzuzo izoqhubeka ngokuhamba kwesikhathi.
Okokugcina, ungayeki ukuqapha ngobaizwe lebhizinisi liyinto enamandla kakhulu lapho izinguquko zingenakugwemeka. Yiba nomthelela, qhubeka ufunda futhi ugcineukusebenzisa ulwazi namakhono. Ukukhula nokwandisa kuzofika ngokwemvelo, futhi umqondo wokuzikhethela uzokugcina uqhubeke.